USam Smith kunye neBurbna Boy Collaborate -iNigeria, iAfrika kunye neMbali yeHlabathi
I-Rave News Digest: USam Smith ubhengeza ukusebenzisana noBurna Boy, i-Kodak Ukutshintshela kumayeza amaPilisi, iPirlo + nangakumbi
Ividiyo: Amanqaku kaSam Smith eBurna Boy Kumculo omtsha obizwa ngokuba 'yi-Oasis yam'
SU-Smith ubhengeza ukusebenzisana noBurna Boy, u-Kodak wenza uguquko ukusuka ekwenzeni iikhamera ukuya kumachiza amayeza, u-Andrea Pirlo ubuyela eJuventus. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
Nantsi ingqangi yezihlanu zeendaba ezitshisa kakhulu… USam Smith Burna Boy
1. USam Smith uhlekisa ngengoma entsha noBurna Boy, 'Oasis Owam'
USam Smith noBurbna Boy
Sam Smith uxele ukukhutshwa okuzayo kwe Indawo yam, ithrekhi entsha ene-Nigerian singer Burna Boy. I-single iya kukhutshwa ngo-7.20 pm BST ixesha laseMelika ngoLwesine, nge-30 kaJulayi. USam Smith waqala wahlekisa enye kwi-Instagram ngoJulayi 29, ethumela ingoma yengoma.
Kwangoko uSam Smith wabhengeza ukusebenzisana noBurna Boy, abalandeli kwihlabathi liphela bavakalise umothuko wabo kwimithombo yeendaba zentlalo njengoko ukusebenzisana kuyinto enye engalindelekanga. Ingoma iza emva kokuba uSam Smith ebhengeze ukukhutshwa kwe-albhamu yakhe yesithathu ye-studio emva ngoMatshi ngenxa yobhubhani be-coronavirus.
Uhlaziyo: Mamela i-Oasis nguSam Smith kunye noBurbna Boy apha
2. INkundla ePhakamileyo iyasirhoxisa isicelo sokuphononongwa kwabavoti eGhana
Inkundla ePhakamileyo yaseGhana isichithile isicelo se-National Democratic Congress (NDC) esifuna inkundla ukuba isijonge ngokutsha isigqibo sayo sokuvumela ukuqhutywa kwabavoti.
Kwisigqibo esinye ngoLwesine, iphaneli yokuphononongwa kwamalungu alithoba, ekhokelwa yiJaji eyiNtloko, ezoBulungisa Kwasi Anin Yeboah, usichithile isicelo ngenxa yokuba i-NDC isilele ekufezekiseni iikhrayitheriya zokuphononongwa. Ngokwenkundla, isicelo khange siphakamise nasiphina isizathu, kwaye khange sibandakanye nakwezinye iimeko ezinokubangela ukuba inkundla iphinde ijonge isigqibo sayo. USam Smith Burna Boy.
3. UMzantsi Afrika: Umphathiswa wezokhenketho ubhengeza uhambo lokuya kukhenketho lwephondo elivunyelweyo
UMphathiswa wezoKhenketho u-Mmamoloko Kubayi-Ngubane
UMphathiswa Wezokhenketho Mmamoloko Kubayi-Ngubane ibhengeze ukuba izilungiso zizisiwe kwimigaqo yokuvalwa kweNqanaba 3 ngoLwesine, nge-30 kaJulayi. Esi sibhengezo siza njengoncedo olukhulu kumashishini kwicandelo lezokhenketho, eyeyona ndawo inzima kakhulu kuqoqosho ngexesha le-COVID-19 bhubhane. kunye nokutshixa okwalandelayo.
Ummiselo omtsha uthetha ukuba ukuhamba kwiphondo lakho ukuya evekini impela-okanye naluphi na usuku olukhethileyo ngaloo nto - kuyavunyelwa, ukwanda kummiselo owawukade uvumela ukuhamba ngezizathu zeshishini kuphela.
UKubayi-Ngubane uthe emva kokuxoxa neengxoxo nabameli abasuka kwicandelo lezokhenketho, kuye kwacaca ukuba kufanelekile ukuba kuvalwe umsebenzi endaweni yoko, amakhulu amawaka abantu aqinisekiswe ukuba baphulukana nemisebenzi kunye nokuziphilisa.
4. Umyili wekhamera uKakak ukhonkxela kwimveliso yeziyobisi kunye nemali mboleko eyi-765M yeedola
U-Eastman Kodak, odume ngeekhamera zakhe, ngoku uzakungena kwimizi mveliso yeziyobisi. Ngemali mboleko yemigidi eedola ezingama-765 yemali ephantsi komthetho wokukhusela ukuvelisa, inkampani iza kukhulisa ukuveliswa kwezithako ezisebenzayo zamachiza (ii-APIs) zamayeza aphambili abenzi bamayeza, urhulumente wase-US uthe kukhululwa.
Imali mboleko, exhaswe yi-US International Development Fund Corporation (DFC), izakubhatala iindleko zokuqalisa kweKakak ukuphindisa izakhiwo ezikhoyo eRochester, eNew York, naseSt. Paul, eMinnesota, ukufaka "Ukuqhubeka kwemveliso kunye nobuchwepheshe obuqhubela phambili," utshilo urhulumente.
Utyalomali olukhulu kwiKakak - inkampani eyabhengeza ukubhengezwa ngo-2012 - iza emva kukaMongameli uDonald Trump ngoMeyi wayalela i-DFC ukuba ilandelele izivumelwano zemboleko ezakuthi zincedise ekuthengisweni kwamayeza asezantsi e-generic kukunqongophala okukhulu ngenxa ye-COVID-19 bhubhane. USam Smith Burna Boy.
5. UAndrea Pirlo ubuyela kwiJuventus njengomphathi ongaphantsi kweminyaka engama-23
UAndrea Pirlo udlale imidlalo eli-164 yeJuventus phakathi kuka-2011 no-2015, wafumana amanqaku ali-19
IJuventus yonyule owayengumdlali webhola ngaphambili Andrea Pirlo njengomphathi wabo omtsha we-Under-23. Lo mdlali uneminyaka engama-41 ubudala, uthathwa njengomnye wabadlali abagqibeleleyo kwisizukulwana sakhe, uphumile kulo mdlalo ukushiya umhlala-phantsi njengomdlali ngo-2017.
UPirlo waphumelela iindebe ezili-116 e-Itali, ebanceda ukuba baphumelele iNdebe yeHlabathi ngo-2006. Waphumelela uSerie A amatyeli amane neJuventus emva kokujoyina esuka kwi-AC Milan, awachitha kuyo uninzi lomsebenzi wakhe ophumelele i-Champions League ezimbini kunye neetayiti ezimbini zeligi.
UPirlo wayishiya iJuventus ngonyaka ka-2015, egqiba umsebenzi wakhe wokudlala kwiMajor League Soccer kwiNew York City FC. USam Smith Burna Boy.
- Bona kwakho
Amabhaso e-BET ngo-2020: Kukuphumelela okulandelayo ngokulandelanayo njengoko iBurna Boy ithatha iKhaya enye enye + Okungakumbi
Uhlobo Rave Julayi 30, 2020
Yenza okungakumbi kunokuKhusela ibhegi: Isikhokelo samanyathelo ngamanqanaba okuba sidilize ingxowa yakho